အီရန်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ဆက်နွယ်သူတချို့ကို ကန် ဒဏ်ခတ် အရေးယူ
အီရန်အတိုက်အခံတွေနဲ့ တခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကုမ္ပဏီတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ကွန်ပြူတာမှာ Malware virus တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး အီရန်ထောက်လှန်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အီရန်က Advanced Persistent Threat 39 အဖွဲ့နဲ့ Rana Intelligence Computing ကုမ္ပဏီအပြင် လူပုဂ္ဂိုလ် ၄၅ ယောက် အတွက် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ချမှတ်ခဲ့တာပါ။
Rana Intelligence Computing ကုမ္ပဏီ ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အီရန်အစိုးရ ရှိနေကြောင်းနဲ့ သူတို့်က အီရန်အတိုက်အခံတွေ၊ သတင်းသမားတွေနဲ့. ခရီးသွားလုပ်ငန်းက နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး malware virus တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု လုပ်နေတာ နှစ်နဲ့ချီနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အီရန်အစိုးရဟာ သူ့ထောက်လှန်းရေးဌာနကို သုံးပြီး အပစ်မဲ့အရပ်သားတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ကမ္ဘာတလွှား မတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဆောင် နေကြောင်းနဲ့ ဒါကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တုန့်ပြန်ဖို့ သံဓိဌာန် ချထားကြောင်းလည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Steve Mnuchin က ကြေညာချက်မှာ ပြောကြားထား ပါတယ်။
အီရနျထောကျလှမျးရေးနဲ့ ဆကျနှယျသူတခြို့ကို ကနျ ဒဏျခတျ အရေးယူ
အီရနျအတိုကျအခံတှနေဲ့ တခွား လူပုဂ်ဂိုလျတှေ ကုမ်ပဏီတှကေို ပဈမှတျထားပွီး ကှနျပွူတာမှာ Malware virus တှနေဲ့ တိုကျခိုကျတဲ့ လှုပျရှားမှု လုပျဆောငျတယျလို့ စှပျစှဲပွီး အီရနျထောကျလှနျးရေးနဲ့ လုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာန နဲ့ ဆကျသှယျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှေ လူပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဒဏျခတျအရေးယူလိုကျကွောငျး အမရေိကနျဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနက ကွာသပတေးနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။
ဆိုငျဘာခွိမျးခွောကျမှုတှေ လုပျဆောငျနတေဲ့ အီရနျက Advanced Persistent Threat 39 အဖှဲ့နဲ့ Rana Intelligence Computing ကုမ်ပဏီအပွငျ လူပုဂ်ဂိုလျ ၄၅ ယောကျ အတှကျ အရေးယူ ဒဏျခတျမှုတှေ ခမြှတျခဲ့တာပါ။
Rana Intelligence Computing ကုမ်ပဏီ ရဲ့နောကျကှယျမှာ အီရနျအစိုးရ ရှိနကွေောငျးနဲ့ သူတိျု့က အီရနျအတိုကျအခံတှေ၊ သတငျးသမားတှနေဲ့. ခရီးသှားလုပျငနျးက နိုငျငံတကာကုမ်ပဏီ တှကေို ပဈမှတျထားပွီး malware virus တှနေဲ့ တိုကျခိုကျတဲ့ လှုပျရှားမှု လုပျနတော နှဈနဲ့ခြီနပွေီ ဖွဈကွောငျး ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန ထုတျပွနျတဲ့ ကွညောခကျြမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။
အီရနျအစိုးရဟာ သူ့ထောကျလှနျးရေးဌာနကို သုံးပွီး အပဈမဲ့အရပျသားတှနေဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို ပဈမှတျထားပွီး ကမ်ဘာတလှား မတညျငွိမျအောငျ လုပျဆောငျ နကွေောငျးနဲ့ ဒါကို အမရေိကနျပွညျထောငျစုက တုနျ့ပွနျဖို့ သံဓိဌာနျ ခထြားကွောငျးလညျး ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး Steve Mnuchin က ကွညောခကျြမှာ ပွောကွားထား ပါတယျ။
သန့်စင်ယူရေနီယံတွေ အီရန် ဆက်လက် စုဆောင်းနေဆဲ
အီရန်မှာဖမ်းခံထားရတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ပြန်လွတ်
အီရန်ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးသူ လျော့နည်း
အီရန်ရေတပ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်း မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု ၁၉ ဦးသေ